Akusilo Iphutha Labo, Elakho | Martech Zone
Akusilo Iphutha Labo, Elakho
NgoMsombuluko, Agasti 21, 2006 NgoLwesibili, Agasti 22, 2006 Douglas Karr
Ngizithola sengiphakathi kwencwadi yokuzilolonga futhi, nginezine epuletini lami njengamanje.
Ngiphakamisile Encane yiNew Big, nguSeth Godin, kule mpelasonto. Sengiyakujabulela yize uMnu uGodin engimangele. Ukube ngifunde okwengeziwe ngalencwadi, bengizobona ukuthi lokho okuqukethwe kungukuhlanganiswa komsebenzi wakhe… Ngicabanga ukuthi kufana nokulalela i-'Greatest Hits ', okuhle ukuzwa zonke izingoma… kodwa uzibuze ukuthi kungani ungekho 'lalela wonke ama-cd owawenawo eshalofini.
Ekupheleni kosuku, sengikhohliwe okuningi engikufundile noma engikuzwile kuMnu Godin. Kuyinto esihlupheka sonke. Ukhumbula malini encwadini? Ngenhlanhla, ngithenga ama-hardcovers ngoba imvamisa ngithatha izincwadi ezindala bese ngibhekabheka kuzo ukuthola ugqozi nemibono. Le ngenye yalezo zincwadi. Uma ngimane ngithathe le ncwadi bese ngifunda indinyana engizokhuluma ngayo, izobe ilingana nezikhathi eziyishumi engikhokhile.
UMnu. Godin ungumbhali onethalente elimangalisayo - uvame ukubeka izimo eziyinkimbinkimbi kakhulu ngamagama alula ongazenza. Abekho abanye ababhali abaningi abagqugquzela indlela enza ngayo. Futhi ngineqiniso lokuthi abanye ababhali abaningi abanakho okulandelayo okwenziwa nguMnu. Ukufunda kwakhe akukutsheli ukuthi okwenzayo akulungile noma kulungile, umane abuze imibuzo bese esho izinto ezikwenza ubhekane ngqo nezimo zakho.
Ekhasini 15, uSeth uthi:
Uma izilaleli zakho ezingalaleli zingalaleli, akulona iphutha lazo, elakho.
Lokho kungazwakala njengokukhulu Hewu, kodwa kunjalo ngempela. Isitatimende singaguqulwa sibe yizakhiwo ezahlukahlukene:
Uma amakhasimende akho engakwazi ukusebenzisa isoftware, akulona iphutha lawo, elakho.
Uma amathemba akho engawuthengi umkhiqizo, akulona iphutha lawo, elakho.
Uma bengavakasheli iwebhusayithi yakho, akulona iphutha labo, elakho.
Uma abasebenzi bakho bengalaleli, akulona iphutha labo, elakho.
Uma umphathi wakho engalaleli, akulona iphutha labo, elakho.
Uma uhlelo lwakho lokusebenza lungasebenzi, akulona iphutha labo, ngolwakho.
Uma oshade naye engalaleli, akulona iphutha labo, elakho.
Uma izingane zakho zingalaleli, akulona iphutha lazo, elakho.
Uma ungajabule, akulona iphutha labo, ngelakho.
Ngicabanga ukuthi iphuzu ukuthi, ziyini wena uzokwenzani ngakho? USeth uyaqhubeka:
Uma indaba eyodwa ingasebenzi, shintsha okwenzayo, hhayi ukuthi ukhamuluka kangakanani (noma ukhwaze).
Shintsha okwenzayo. Unamandla okushintsha. Ushintsho alusho ukuthi kufanele ukwenze wedwa, noma kunjalo. Cela usizo uma uludinga.